एकल लीभर बाथरूम नल ब्रश निकल
घर / बाथरूमको नल / एकल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW बाथरूम Vessel faucets निकल ब्रश
रेटेड 5.005बाहिर आधारित 18 मूल्यांकन ग्राहक
नल संग्रह तपाईं बाथरूम को विभिन्न काम क्षेत्रहरु को लागी नयाँ नयाँ तरीकाले reimagined कालातीत लेआउट ल्याउँछ। भित्ता माउन्ट गरिएको बाथरूम ट्यापहरू धेरै फरकहरूमा समाप्त गर्नुहोस्।
2321501 स्थापना निर्देशन
बाथरूम नल एकल ह्याण्डल 2321501
यो बाथरूम नल एकल ह्याण्डल तपाइँको बाथरूम एक स्टाइलिश अपग्रेड प्रदान गर्दछ। यो ध्यानपूर्वक फ्लेयरको साथ डिजाइन गरिएको थियो, र अझै सम्म एउटा सूक्ष्म मोडमा। WOWOW को अनौंठो बाथरूम नल एकल ह्याण्डल एक क्लासिक ब्रश निकल फिनिशको साथ संयोजनमा, ट्रिपल-कर्भको साथ डिजाईन गरिएको थियो। केहि पनि होइन यस बाथरूमको नल एकल ह्याण्डल कुनै पनि बाथरूममा एक आइक्याचर हो, र निश्चित रूपमा तपाईको नयाँ बाथरूम सजावटको मुख्य आकर्षण मध्ये एक बन्छ।
अनुसन्धानले देखायो कि कुनै पनि बाथरूममा बाथरूमको नल प्राथमिक प्राथमिक पोइन्ट हुन्। यसको मतलब सबैको ध्यानाकर्षण स्वतः बाथरूम faucets मा आकर्षित हुन्छ। सम्भवतः बाथरूमको नलहरू तपाईको बाथरूम सजावटको सब भन्दा सानो वस्तु हो। र अझैसम्म तिनीहरू यसको भव्यता को धारणा मा ठूलो प्रभाव छ। निश्चित रूपमा, तपाईं कुनै बाथरूममा भव्यताको स्पर्श थप्न सक्नुहुन्छ बाथरूमको नल एकल ह्यान्डल WOWOW को साथ। WOWOW का डिजाइनरहरूले बाथरूम faucets को प्रभाव स्पष्टसँग बुझेको छ, र यसको नतिजा बाथरूम faucets कि कुनै पनि सजावट मा एक फरक बनाउन सक्छ डिजाइन।
बाथरूम नल एकल ह्यान्डल डिजाइन
तपाइँ तपाइँको बाथरूम सजावट एकै समयमा स्टाइलिश र कार्यात्मक भएको चाहानुहुन्छ। फलस्वरूप, तपाईले निर्णय गर्नु पर्छ कि तपाई कस्तो प्रकारको बाथरूम नल छान्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका बाथरूम faucets छन्, तपाईं पहिले उपलब्ध उपलब्ध ठाउँमा हेर्नु पर्छ, र तपाईं पानी तापक्रम नियन्त्रणको सन्दर्भमा के रुचि। के तपाईं पानीको तापक्रम र भोल्युम २ ह्यान्डलको साथ वा केवल एकसँग नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ? जब तपाईं केवल एउटा ह्यान्डल मनपराउनुहुन्छ, तब बाथरूमको नल एकल ह्याण्डल WOWOW हुन सक्छ कि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सुरुमा सुरु भएको राम्रो बाथरूम नल!
यो बाथरूम नल एकल ह्याण्डल दुवै स्टाइलिश र कार्यात्मक दृष्टिकोणबाट डिजाइन गरिएको थियो। एकल घुमाइएको ह्यान्डल आरामसँग बाथरूमको नलको छेउमा अवस्थित छ। WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्याण्डल सजिलै सञ्चालन गर्दछ। पानीको मात्रा र तापमान आरामसँग एकल हातले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एकल ह्यान्डल कुनै शंका बिना पकड र संचालन गर्न सजिलो छ। तपाई केवल बाथरूमको नलको ह्यान्डल एकल हातले यसलाई तान्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरिकाले समायोज्य पानीको प्रवाह सक्रिय हुन्छ। एकल ह्याण्डल घुमाएर तपाईं पानीको तापक्रम सजिलै र सजिलो रूपमा बढाउन सक्नुहुन्छ। युएस-प्याटेन्टेड ट्रिपल-कर्भलाई आकार दिने निश्चित रूपले अद्वितीय छ। यसले तपाईंको बाथरूमलाई अझ उच्च-अन्त बनाउँदछ, जबकि सबै प्रकारका सुविधाहरूबाट फाइदा लिई यसले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ।
उच्च-गुणस्तरको बाथरूम नल एकल ह्याण्डल
WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्याण्डल विशाल ब्रासको बनेको छ र यसको ब्रश निकल फिनिश हात पालिस र बनावट थियो। यसको परिष्करणको लागि, WOWOW ले अधिकतम गुणवत्ता र टिकाऊपन प्रदान गर्न अत्याधुनिक-प्रविधि प्रयोग गर्दछ। किनभने WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्याण्डल ठोस काँसाले बनेको छ, यो नवीन बाथरूम नल पनि ओस र अधिक इष्टतम प्रतिरोध प्रदान गर्दछ। कुनै चीजको लागि होईन, WOWOW ले यसको बाथरूमको नल एकल ह्यान्डलको लागि au बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दछ। एक प्रमाण छ कि WOWOW ले यसको उत्पादनको गुणस्तरमा विश्वास गर्दछ र यसको वर्ष-लामो प्रदर्शनको लागि जिम्मेदारी लिन्छ।
यस बाथरूमको नल एकल ह्याण्डलको डिजाईन अद्वितीय र प्याटेन्ड गरिएको छ, यसका केहि कार्यहरू अद्वितीय छन्। उदाहरणका लागि टिकाऊ पानी बचत aerator। यस बाथरूमको नल एकल ह्यान्डलको उच्च प्रदर्शन नियोपरल एररेटरले कोमल र चिल्लो पानी प्रवाह नियन्त्रण सुविधा दिन्छ। तसर्थ तपाईं कुनै पानी छप्ल्याउने अनुभव छैन। यस बाहेक यसले पानीको उपयोगमा %०% सम्म बचत गर्दछ। यो तपाइँ पक्कै तपाइँको पानी बिल मा नोटिस हुनेछ। Aerator सजिलैसँग (समावेश) aerator उपकरण संग हटाउन सकिन्छ। यस तरीकाले तपाईं यसलाई सजिलैसँग अब र त्यसपछि सफा गर्न सक्नुहुन्छ, वर्षौंको लागि उत्तम प्रदर्शन अनुभवको ग्यारेन्टी गर्न।
सजीलो बाथरूम नल एकल ह्यान्डल
सबै भन्दा पहिले, ब्रश निकल फिनिश कुनै पनि बाथरूममा एक सुन्दर स्पर्श दिन्छ। यसका साथै उच्च-गुणस्तरको फिनिशिंगले पानीको दागहरू, फेडिंग र फिंगरप्रिन्टहरू पनि प्रतिरोध गर्दछ। त्यसकारण यसलाई कायम राख्न र सफा गर्न सजिलो छ। तपाईको बाथरूमको नल एकल ह्याण्डललाई फेरि नयाँको रूपमा चम्किलो बनाउन तपाईले न्यानो लुगाहरूबाट सबै बाँकी अंश सफा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको बाथरूमको नल नियमित रूपमा सफा गर्न साथै लामो जीवन धैर्यको ग्यारेन्टी गर्दछ। यस तरीकाले कडा अवशेषहरूमा तपाईंको बाथरूमको नलमा टाँस्न कुनै परिवर्तन हुँदैन। विशेष गरी, चाक जस्तो अवशेषले तपाईंको बाथरूमको नललाई असर गर्न सक्छ, यदि यो नियमित रूपमा सफा गरिएको छैन भने। WOWOW ले यसलाई सजिलो बनाउँदछ, ताकि कुनै पनि प्रयास बिना यो गर्न सक्नुहुन्छ।
बाथरूमको नल एकल ह्यान्डलको सिरेमिक वाल्भले तपाईंलाई १००% ड्रिप मुक्त प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। र अझै यो अपरेट गर्न को लागी सहजता घटाए बिना। यो उच्च-गुणस्तरको सिरेमिक कार्ट्रिज 100००,००० भन्दा बढी पानी चक्रको साथ परीक्षण गरिएको थियो। र अझै पनि WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्यान्डल उही सहजताका साथ सञ्चालन भइरहेको थियो। र पक्कै पनि अझै ड्रिप-शुल्क र चुहावट मुक्त। कल्पना गर्नुहोस् कि बाथरूमको नल प्रति वर्ष १०,००० पटक भन्दा बढी प्रयोग हुन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि बाथरूमको नल एकल ह्याण्डलको साथ WOWOW तपाईंले जीवनको लागि बाथरूमको नल किन्नुभयो। यो एकल ह्यान्डल गरिएको बाथरूम नलले सबै उद्योग मापदण्डहरू पार गर्‍यो!
आफैंमा बाथरूमको नल एकल ह्यान्डल गर्नुहोस्
बाथरूम नल एकल ह्यान्डल आफैलाई स्थापना गर्न सजिलो छ। तपाईंलाई कुनै महँगो प्लम्बरको आवश्यक पर्दैन! त्यसकारण तपाईं नाटकीय रूपमा स्थापना लागत मा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो आफैले आफैंको बाथरूमको नल उपकरण र स्थापना उपकरणहरूको पूरा सेटको साथ आपूर्ति गरिन्छ। यसले मेटल डेक प्लेट, २० ईन्च टुकाई पानीको नलीको ग्यारेन्टीको गुणस्तर, स्थापना ग्लोभज, एरेटर हटाउने उपकरण, र अधिक समावेश गर्दछ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार WOWOW यसको बाथरूम faucets को गुणवत्ता को बारे मा अत्यधिक विश्वास छ। त्यसकारण WOWOW ले तपाईंलाई एक मानार्थ3बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँको बाथरूमको नल एकल ह्याण्डलले काम नगर्न सक्छ भने, तपाइँलाई तपाइँको ठाउँमा नयाँ ब्रिटिश नल बाथरूम एकल ह्याण्डल प्रदान गरिनेछ। र साथै, WOWOW ले 90 ०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ पैसाको लागि मूल्यबाट प्रभावित हुनुहुन्न भने WOWOW ले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दैछ, तपाईं हुनेछ
कुनै अतिरिक्त लागतमा पूर्ण फिर्ती प्राप्त गर्नुहोस्, र बिना प्रश्न सोधेको। त्यो जस्तो सरल!
 अमेरिकी-पेट्रेटेड ट्रिपल-कर्भ डिजाइन
 निकट ब्रश निक निक
High उच्च-गुणवत्तायुक्त सामग्रीबाट बनेको
 आरामदायक एकल-ह्यान्डल लीभर
The a०% पानीको नवीन इनरेटरको साथ बचत गर्दछ
।-बर्षे वारंटी अवधि
SKU: १2321501००।। विभाग: बाथरूमको नल, एकल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: २ ह्यान्डल, H होल, बाथरूम नल
16.2 x 9.1 x6इन्च
धेरै सुरुचिपूर्ण नल, उत्कृष्ट गुणवत्ता र एएसई स्थापना
यस उत्पादनको एकल ह्यान्डल हुनुको अलावा अद्वितीय रूप थियो, त्यसैले किन मैले खरीद गरें। म उत्पादन को गुणवत्ता र समाप्त संग धेरै सन्तुष्ट छु र मेरो खरीद संग खुसी छु।
मैले यो मेरो बाथरूममा अवस्थित २-ह्यान्डल, hole-होलको नल बदल्नको लागि किनेको हो। जे होस्, भ्यानिटीमा सेन्टर होल एकदम सानो थियो र यस नयाँ नललाई समेट्नका लागि ड्रिल गर्न आवश्यक पर्‍यो, यस नलको साथ अनुहार प्लेट2प्वालहरू ढाक्यो।
यस नल गुणवत्ता, आधुनिक स्टेनलेस स्टील र पीतल फिटिंग को उपयोग गर्दछ। सेन्टर फिटिंगमा पीतलको घण्टी हुन्छ जुन नललाई भ्यानिटमा सुरक्षित गर्दछ र औंठीको दुबै पट्टि २ स्क्रू कडाई सुनिश्चित गर्न। यो कत्ति राम्रो faucets यी दिनहरु स्थापित जो देखिन्छ, जुन म कदर2कच्चा रिक्त स्थान मा कस टोकरी मा उचित टोक़ प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो दिइएको कदर गरेको।
ड्रेन टुक्रा ठ्याक्कै माउन्ट हुँदैन मेरो सिink्कमा पूर्णतया फ्लश गर्दछ, तर मँ त्यसो गर्दछु कि यो पुश-टु-नजिक ड्रेन हो बरु तपाईले तान्नु भएको पट्टी हुनु भन्दा पनि। कालो नाली र सेतो सिंकको विपरित राम्रो छ। केहि मानिस चिन्तित हुन सक्छन् कि नाली प्लास्टिक हो, त्यसैले ध्यान दिएन लायक छ। मैले यो देख्नुपर्दछ कि यो कसरी समयसँगै खडा हुन्छ।
यो ध्यान दिन लायक छ कि मैले भूतकालमा यस प्रकारको साधारण पाइपलिing्ग गरेको छु। म एक उपयोगी DIY'er हुँ, तर कुनै पनि हिसाबले अनुभवी प्लम्बर होइन। मैले प्रयोग गरेको उपकरण र सामग्रीहरूमा एक रेन्च, च्यानल लक, स्क्रूड्राइभर, बाल्टिन, तौलिया, प्लगमेस पुट्टी, टेफ्लन टेप, Rigid EZ परिवर्तन नल उपकरण (र १ १/२ ″ होल आरा + ड्रिल घनिष्ठता परिमार्जन गर्नको लागि) समावेश थियो।
म यो नलबाट धेरै प्रभावित छु। यो राम्रोसँग निर्मित छ, भारी छ, धेरै राम्रो देखिन्छ र राम्रोसँग कार्य गर्दछ। स्थापना एक हावा थियो, तर आपूर्ति लाइनहरू थोरै छोटो थिए। चिन्ता छैन। निर्माताले टेफ्लन टेपसमेत आपूर्ति गरे। केवल मेरो इच्छा यो थियो कि माउन्टिंग प्लेट मुनिको कुनै प्रकारको प्लास्टिक स्पेसर थियो त्यसैले यसलाई अलि बढी कडा बनाउन सकिन्छ। म निश्चित छु कि म केहि फेसन गर्न सक्दछु। सबैमा, यो नलको एउटा हेक हो।
जस्तो कि अरूले औंल्याएझैं, नल कडा पार्दा डेक प्लेट झुकाउने झुकाव हुन्छ। यसको लागि मेरो समाधान होडीज मार्फत जाने थ्रेडेड आस्तीनको वरिपरि ओ-रिंगहरू प्रयोग गर्नु हो। ओ-रिंगहरू त्यस बाहुलाको वरिपरि फिट गर्न पर्याप्त ठुलो हुनुपर्दछ तर डेक प्लेट मार्फत पर्याप्त सानो छ। मैले यी मध्ये केही स्ट्याक गरें जसले गर्दा स्ट्याक उचाई डेक प्लेट उचाइ भन्दा अलि लामो भयो। ओ-रिंग्समा एक थप बोनस छ कि यसले नल र डेक प्लेट केन्द्रमा मद्दत गर्दछ। यस विधिको साथ, म नललाई तल कडा गर्न सक्षम भएँ ताकि यो सर्ने छैन र प्लेटमा निहुदैन।
म यस नलको बिल्कुल प्रेममा छु। यो आकर्षक लाइनहरु र सरलता दर्शनीय छ। यो राम्रोसँग बनेको छ, कुनै पनि हिसाबले सस्तो छैन। सबै भागहरू सजिलैसँग पहिचान योग्य छन् र यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो। म एक प्लम्बर होइन र न्यूनतम अनुभव छ, मँ नयाँ चीजहरू खोज्न मन पराउँछु र म यसलाई वास्तवमै सँगै राख्नको लागि सक्षम थिएँ र यसलाई एक घण्टा भित्रै काम गरिरहेको छु।
प्रवाह लगभग laminar छ र यो एक टन पानी बाहिर राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई दिनुहोस्।
म हाम्रो अतिथि स्नान मा यो पाउँदा धेरै उत्साहित छु र पहिले नै प्रशंसा प्राप्त गरिसकें!
यो अविश्वसनीय मान हो। मैले केहि faucets2वा3पटक कास्टि compared तुलना गरें र उनीहरू तुलना गर्दैनन्। यो चीज धातुको ठोस हिस्सा हो! यो भावना शुद्ध गुण हो। म एक मध्यम उमेरको एकल मान्छे हुँ। म बाथरूमको स्थिरताको बारेमा यो खुशी हुनु हुन्न तर मलाई यो मन पर्छ!
मैले यसलाई पुरानो s० को बाथरूममा स्थापना गरें जुन अझै फिक्सचर छन्। मैले सेन्टर प्वालको प्वाल बनाएर यसलाई ठूलो बनाउनु परेको थियो। मैले नालीको लागि पनि यस्तै गर्नु पर्थ्यो। मैले यससँगै आउने नालीको प्रयोग गरिनँ, मैले ठोस मेटल पप अप रोजगार खरीदें। यसले मेरो बाथरूमलाई परिवर्तन गरेको छ र यसलाई अझ माथिल्लो अनुभूति भएको छ, यदि यो मेरा हात धुने मात्र हो भने, जुन हामी सबैले हालै गरिरह्यौं।
वाह नल धेरै उच्च गुणवत्ताको छ र डिजाइनको लागि मूल्य एकदम सुन्दर छ। निकल फिनिशमा एक राम्रो साटन लुक छ र सफा र स्पट फ्री राख्न सजिलो छ। साधारण हात नियन्त्रण को उपयोग गर्न सजिलो र सहज छ। यो एक कभर प्लेटको साथ आउँदछ यदि आवश्यक छ तीन प्वालबाट एकमा रूपान्तरण गर्न को लागी, तर म यसलाई एकल प्वालमा प्लेट बिना नै आरोहण गर्दछ। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो, तर सावधान रहनुहोस् कि फिड लाइनहरू केवल एक फिट लामो हुन्छ र तपाईंलाई आफ्नो इनपुट भल्भहरूमा पुग्न थप पानी लाइन एक्सटेन्सनहरू आवश्यक पर्दछ। यो एक सुन्दर उत्पाद र मूल्य को लागी एक महान मूल्य हो।
एल *** h2020-06-29
बिल्कुल तेजस्वी! हाम्रो प्लम्बरले सोधे कि हामी कहाँ नल भेट्यौं किनकि यो यति राम्रो गुण हो र ऊ आफैं एउटा पाउन चाहान्छ। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। यो सबै माथि शीर्ष, यो अत्यन्तै सुन्दर छ।
म ट्यापबाट धेरै सन्तुष्ट छु! डिजाइन सरल र रमणीय छ, जसले मेरो बाथरूम राम्रो देख्दछ! सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो हो कि स्थापना एकदम सरल छ! इमान्दार हुन, मलाई लाग्छ कि यसलाई स्थापना गर्न केहि समय लिने छ, तर निर्देशनहरू स्पष्ट र बुझ्न सजिलो छ। यस नलको उपस्थितिको लागि म प्रशस्त छु। म माथि बाथरूममा एक अमेरिकी मानक नल थियो, तर यो वास्तवमै राम्रो लागेन। मलाई यो नलको उपस्थिति मनपर्दछ, र मलाई सतहको उपचार मन पर्छ!
१० मध्ये १०! तीन खरिद गर्नुभयो र उनीहरूलाई बिल्कुलै माया गर्नुहोस्! धेरै राम्रो गुण र मूल्य एक चोरी हो।
नल अलि मोटो वा मैले मनपराएको भन्दा भारी छ!
मलाई शैली र नलले काम गर्ने तरिका मनपर्दछ, राम्रो सामग्री। धेरै राम्रो
पहिलो बाथरूम नल मैले कहिल्यै किनेको! यो अचम्मको छ! राम्रो र मजबूत बनाइएको! सिंकमा स्टिक र स्टपर महान छ। म absolutley प्रेम!
Faucets समीक्षा गर्न मसँग एक परीक्षण स्टेशन स्थापना गरिएको छ।
उत्पादनको गुणस्तर र स्थापनाको जटिलताको सर्तमा म सकेसम्म राम्रा चीजहरू भत्काउन कोशिस गर्नेछु।
१-१० को मापनमा, म भन्न सक्छु कि यो नल /1/१० सम्म स्थापना कठिनाई सम्म छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो तपाइँको सिink्क र क्याबिनेट कसरी डिजाइन गरिएको छ भनेर फरक हुन सक्छ।
यो विशेष नल राम्रो गुण हो।
कालो फिनिश राम्रो देखिन्छ। समग्रमा यो नल एकदम टिकाऊ देखिन्छ। मलाई यो मनपर्दो छ किनकि मैट हेराईको कारणले भन्दा दाग लाग्दैन। यो चमक कायम राख्न क्रोमको रूपमा आवधिक रूपमा खाली हुनु हुँदैन।
एकल ह्यान्डलले पानीको तापक्रम चयन गर्न सजिलो बनाउँदछ। मिक्स वाल्भले राम्रो काम गर्दछ, जस्तो कि यो हुनुपर्दछ।
यो नल सञ्चालन गर्न सजिलो छ र कुनै समस्या बिना सजीलै हिंड्छ।
यो 360 XNUMX० डिग्री रोटेशन मिल्दो तथ्य हो जुन तपाईं यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसैले तपाईं चाहानुहुन्छ र यो जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ त्यस ठाउँमा सर्नेछ। डेक प्लेटको साथ पनि आउँदछ। तपाईं आफ्नो सिंकमा ती अप्रयुक्त प्वालहरू कभर गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग टाउको तान्ने क्षमता छ, जुन पक्कै पनि प्लस हो। बहु स्प्रे मोड केही अन्य पुल डाउन faucets मनपर्दैन। जहाँ टाउको बाहिर आउँछ को आधार राम्रोसँग डिजाईन गरीएको छ ताकि यो समयको भरमा तपाईंले प्रयोग गर्दा नलीलाई नछोड्नुहोस्।
फिट र फिनिशको साथ सुन्दर डिजाईनले यसलाई एक बनाउँदछ यदि सबै भन्दा राम्रो faucets। चित्रहरु द्वारा यो भन्न गाह्रो तर नल संग एक अनौंठा डिजाइन टाउको मा एक सानो मोड़ समावेश छ, यो लगभग एक कला को टुक्रा बनाउने। यो भारी ठोस निर्माण हो। अफ सेट ह्याण्डल वास्तवमै अचम्मको पनि छ। सीधा अगाडि सजिलो स्थापना पनि दस्ताने संग आउँछ। म पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्दिन!
सबै सामानहरू र आपूर्तिको साथ स्थापना सजिलो छ, सामग्रीहरू राम्रोसँग निर्माण गरिएको र राम्रो गुणको रूपमा देखा पर्दछ। तिनीहरूले नली र कनेक्टरहरूको आपूर्ति गरे निर्दोष रूपमा मेरो पुरानो नल प्रतिस्थापन। पानी प्रवाह सहज रूपमा र एकल ह्यान्डलर र थोरै आवाज संग राम्रो प्रतिक्रिया र मेरो पुरानो नल जस्तै कुनै splashing प्रभाव। डिजाईन एकदम रमाईलो छ र मेरो पुरानो बाथरूम नयाँ र आधुनिक देखिन्छ। एकमात्र कमी भनेको पप-अप ड्रेन फिक्स्चरको साथ आउँदैन र मैले यो मेरो पुरानो फिक्स्चरको साथ म्यानुअली सेट गर्नुपर्नेछ। समग्रमा, राम्रो गुण र राम्रो हेर्ने र धेरै वर्षसम्म रहनु पर्छ, म भविष्यमा फेरि अपडेट गर्नेछु यदि कुनै मुद्दा उठ्छ भने।
यो मैले देखेको सबैभन्दा भव्य बाथरूम नल हो। योसँग धेरै शैली छ र यो धेरै भारी छ। धेरै राम्रोसँग बनेको छ र महान कार्य गर्दछ। यो सजिलो स्थापना थियो। जो कोही ठोस, आधुनिक नल चाहान्छ यसलाई सिफारिस गर्दछ।
मैले मेरो बाथरूमको नल अपग्रेड गर्न खरीद गरें जुन मिति पाउँदैछ। म नयाँ नल स्थापना गर्दा कठिनाई स्तरको बारेमा चिन्तित थिएँ। जे होस्, प्याकेज यो कसरी स्थापना गर्ने बारे पुस्तिकामा आएको थियो। गाह्रो हिस्सा मेरो बाथरूममा मेरो अवस्थित प्लम्बिंगको साथ यसलाई पुनःप्रशोधन गर्दै थियो। तर यो थाहा पाउन धेरै खराब थिएन। यद्यपि स्थापना समय मेरो लागि १ घण्टा भन्दा बढि हो किनकि मैले पहिला कहिल्यै प्लम्बिंग कार्य गरेको छैन। म विशेष रूपमा खुसी थिएँ कि यो बेसको लागि प्लेटैटको साथ आएको थियो किनकि मेरो वर्तमान नलमा gran प्वालहरू थिए जुन मेरो ग्रेनाइट माथिको ड्रिल गरिएको थियो त्यसैले म प्लेटको उपयोग गर्न सक्षम भयो २ यो प्वालको आवश्यक पर्दैन। साथै हातको दोस्रो सेट राख्नु अत्यधिक सहयोगी हुनेछ यदि मैले यसलाई एक्स्टल गरें तर त्यसले गाह्रो स्तरलाई बढायो।
मैले प्रयोग गरेको सबै ११ मि.मी. फ्रेन्च थियो जसमा ट्यापको नली मेरो घरको पाइपम्बिंग (तातो र चिसो रेखा) मा क्ल्याम्प गर्न थियो, स्क्रू चालक तल ग्रानाइटमा नल बोल्ट गर्न र ड्रेम टोपी परिवर्तन गर्न क्ल्याम्पको लागि।
प्याकेज एक ग्लोभको साथ आयो त्यसैले यो सबैमा फिंगरप्रिन्ट स्मीरहरू रोक्नको लागि तर मैले यो प्रयोग गरिन।
अहिले सम्म, म यसलाई प्रयोग गर्दै छु र घरका प्रत्येकलाई नयाँ नल जस्तो देखिन्छ। म निश्चित रूपमा यस स्टोरबाट अधिक नलहरू खरीद गर्दैछु किनकि म घर वरिपरिको अन्य faucets अपग्रेड गर्न खोज्छु।
राम्रो देखिएको छ। सानो बाथरूमको लागि अलि ठूलो। स्वाद को मीटरहरु।
मेरो बाथरूम सिंकको लागि धेरै राम्रो अपग्रेड। राम्रो गुण